Ithegi: i-captcha | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 28, 2012 NgoLwesibini, Novemba 27, 2012 Douglas Karr
Ndiyabucaphukela ubuchwephesha beCaptcha. ICaptcha sisichasi sokusebenziseka. Endaweni yokwenza ukuba kube lula kubasebenzisi, itekhnoloji iphazamise ngabom abasebenzisi bayo ukuze ibathintele. Ungayichazanga eyokuba i-CAPTCHA igqitha ngobuchwephesha obutsha kunye neetekhnoloji ze-OCR. I-CAPTCHA: Uvavanyo oluzenzekelayo loLuntu oluVavanywayo ukuxelela iikhompyutha kunye nabantu abahlukeneyo Ngombulelo, omnye umntu ucinga ukuba kubi kakhulu. Ukuqiniseka kweTekhnoloji kuyile indlela entsha yokuqinisekisa abasebenzisi ngelixa kuthintela ukubhalwa kwezikripthi
Mhlawumbi lelinye lawona mava mabi omsebenzisi ndiqhubeka nokungena kuwo kwiwebhu yitekhnoloji yeCaptcha. I-Captcha kuxa umfanekiso wenziwe ngamanani, iileta, kwaye ngamanye amaxesha amagama kufuneka uthayiphe kwakhona kwenye intsimi. Oku kukuthintela iifom ezizenzekelayo kwifom spammers. Kuba abanakho ukucacisa ikhowudi, abanakho ukuhambisa iiposti. Iimpazamo zeCaptcha Itekhnoloji yokuphazamisa. Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amaxesha